Hello Nepal News » ‘भाल्भर्डेको विकल्प’मा आयाक्सका प्रशिक्षक पहिलो नम्बरमा !
‘भाल्भर्डेको विकल्प’मा आयाक्सका प्रशिक्षक पहिलो नम्बरमा !
एजेन्सी, असोज १८
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना हालका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको नेतृत्वमा अहिले संघर्ष गरिरहेको छ । समग्रमा उसले सिजनको सुरुआत खराब तरिकाले गरेको थियो । तर, पछिल्ला दुई खेलमा उसले जित निकालेर लय समातेको छ । यद्यपि, बार्सिलोनमा भाल्भर्डेको भविष्य सुनिश्चित भने छैन । आगामी दिनमा एक–दुई खराब नतिजा आउनासाथ क्लबले जुनसुकै बेला पनि भाल्भर्डेलाई बर्खास्त गर्ने सम्भावना छ ।
यदि अबका दिनमा बार्सिलोनाले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न नसके वा केही खराब नतिजा व्यहोरे भाल्भर्डेको विकल्प बार्सिलोनाले खोज्नेछ । त्यसको तयारीमा उसले सम्भावित नामसमेत तयार पारेको छ । डच मिडिया रिपोर्टअनुसार बार्सिलोनाले आफ्ना सम्भावित नयाँ प्रशिक्षकका लागि आयाक्सका प्रशिक्षक इरिक टेन हगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पछिल्ला सिजन आयाक्सलाई युरोपियन फुटबल तथा घरेलु लिगमा समेत शानदार नेतृत्व दिँदै आएका हग रणनीतिक फुटलमा माहिर मानिन्छन् । उनै हगलाई बार्सिलोनाले आफ्ना नयाँ प्रशिक्षकका रूपमा टार्गेटमा राखेको चर्चा छ । यदि भाल्भर्डेले पद छाडे वा बर्खास्त गरे बार्सिलोनाले हगलाई नयाँ प्रशिक्षक बनाउन प्रयास गर्नेछ ।
त्यसैगरी, स्पेनिस र अर्जेन्टिनी मिडियाले बार्सिलोनाले अर्जेन्टिनी क्लब रिभर प्लेटका मार्सेलो गालार्डोलाई पनि सूचीमा राखेको छ । हाल रिभर प्लेटेलाई उत्कृष्ट नेतृत्व दिइरहेका उनको खेलाउने शैली बार्सिलोनासँग मिल्ने भएकाले बार्सिलोनाले उनलाई नयाँ प्रशिक्षक बनाउने सम्भावना प्रबल छ । उनी अर्जेन्टिनी म्यानेजर हुन् ।
प्रकाशित मिति १८ आश्विन २०७६, शनिबार ११:४०